SARUDZA MUTAURO Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aukan Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Batak (Toba) Belize Kriol Bengali Biak Bicol Bislama Boulou Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano ChiChangana (Mozambique) ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiKaren (S'gaw) ChiSutu (Lesotho) ChiSutu (South Africa) ChiTetun Dili Chichewa Chin (Hakha) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chopi Chuukese Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Digor Douala Drehu Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Iban Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kabiye Kannada Kazakh Kekchi Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Low German Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Marshallese Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mizo Moore Mutauro Wemasaini wechiQuebec Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuArgentina Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuChile Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuGermany Mutauro Wemasaini wokuHungary Mutauro Wemasaini wokuIndia Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuKorea Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuPoland Mutauro Wemasaini wokuRussia Mutauro Wemasaini wokuVenezuela Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Navajo Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Nias Niuean Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Runyankore Russian Rutoro Samoan Sango Saramaccan Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tarascan Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Urhobo Uruund Uzbek Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yapese Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Kana uchida kuziva mumwe munhu, chinhu chaunotanga kubvunza izita rake. Dai waizobvunza Mwari, aizokupindura achiti kudii?
“Ndini Jehovha. Ndiro zita rangu.”—Isaya 42:8.
Zita iri wakamborinzwa here? Kana kari kekutanga, zvimwe imhaka yekuti maBhaibheri akawanda haanyanyi kushandisa zita raMwari uye mamwe haatorina. Vanowanzoritsiva nerekuremekedza rekuti “ISHE.” Asi zita raMwari rinowanikwa kanosvika ka7 000 muzvinyorwa zveBhaibheri zvepakutanga. Zita racho rine mabhii mana echiHebheru anoenderana neekuti YHWH kana kuti JHVH, uye muchiShona rinonzi “Jehovha.”
Zita raMwari rinowanikwa kakawanda muzvinyorwa zvechiHebheru uye mumaBhaibheri akawanda
Mupumburu weMapisarema Wakawanikwa kuGungwa Rakafa 30-50 C.E., CHIHEBHERU
Shanduro yaTyndale 1530, CHIRUNGU
Shanduro inonzi Reina-Valera 1602, SPANISH
Shanduro inonzi Union Version 1919, CHINESE
NEI ZVICHIKOSHA KUZIVA ZITA RAMWARI?
Mwari pachake anokoshesa zita iri. Mwari ndiye akazvipa ega zita iri. Jehovha akati: “Iri ndiro zita rangu nokusingagumi, uye ndiro randichayeukwa naro kusvikira kuzvizvarwa nezvizvarwa.” (Eksodho 3:15) MuBhaibheri, zita rekuti Jehovha rinowanikwa kakawanda kupfuura ekuremekedza akadai seekuti Wemasimbaose, Baba, Ishe kana kuti Mwari. Rinowanikwawo kakawanda kupfuura mazita evanhu vakadai saAbrahamu, Mosesi, Dhavhidhi kana kuti Jesu. Uyezve Jehovha pachake anotoda kuti zita rake rizivikanwe. Bhaibheri rinoti: “Vanhu vazive kuti imi, mune zita rokuti Jehovha, imi moga ndimi Wokumusorosoro kumusoro kwenyika yose.”—Pisarema 83:18.
Jesu anokoshesa zita iri. Mumunyengetero waShe wemuenzaniso, Jesu akadzidzisa vadzidzi vake kuti vakumbire Mwari vachiti: “Zita renyu ngaritsveneswe.” (Mateu 6:9) Jesu pachake akatonyengetera kuna Mwari achiti: “Baba, kudzai zita renyu.” (Johani 12:28) Jesu aikoshesa chaizvo kukudzwa kwezita raMwari, zvekuti mumunyengetero wake akati: “Ndakavazivisa zita renyu uye ndicharizivisa.”—Johani 17:26.
Vaya vanoziva Mwari vanokoshesa zita iri. Vashumiri vaMwari vekare vaiziva kuti kudzivirirwa uye kuponeswa kwavo kwaibva pane zvairehwa nezita raMwari. “Zita raJehovha inhare yakasimba. Munhu akarurama anomhanyira mariri odzivirirwa.” (Zvirevo 18:10) “Munhu wose anodana zita raJehovha achaponeswa.” (Joeri 2:32) Bhaibheri rinoratidza kuti zita raMwari raizosiyanisa vanhu vanomunamata nevasingamunamati. Rinoti: “Marudzi ose, achafamba rumwe norumwe nezita ramwari warwo; asi isu, tichafamba nezita raJehovha Mwari wedu nokusingagumi, kunyange nokusingaperi.”—Mika 4:5; Mabasa 15:14.
ZITA RAMWARI RINORATIDZEI?
Zita iri rinoratidza zvakaita Mwari. Nyanzvi dzeBhaibheri dzakawanda dzinobvumirana kuti zita rekuti Jehovha rinoreva kuti “Anoita Kuti Zviitike.” Jehovha Mwari akaratidza zvinorehwa nezita rake paakaudza Mosesi kuti: “Ndichava Iye Wandichava.” (Eksodho 3:14) Zita raMwari haringogumiri pakureva kuti ndiye Musiki wezvese. Rinoratidzawo kuti iye pachake anokwanisa kuita kuti chinangwa chake chizadzike kana kuti kushandisa zvisikwa zvake kuzadzisa chinangwa ichocho. Mazita ake ekuremekedza anoratidza nzvimbo yaainayo, kana kuti simba rake. Asi zita rake rekuti Jehovha ndiro chete rinotsanangura zvese zvaari uye zvaanoita.
Zita iri rinoratidza kuti Mwari anotida. Zita raMwari rinoratidza kuti anoda zvisikwa zvake kusanganisira isu vanhu. Uyezve, kutiudza zita rake kwaakaita kunoratidza kuti anoda kuti timuzive. Ndiye akatotanga kutiudza nezvaro tisati tatombozvarwa. Izvi zvinoratidza kuti Mwari anoda kuti timuone semunhu chaiye uye tiswedere pedyo naye.—Pisarema 73:28.
Kushandisa zita raMwari kunoratidza kuti tinomuda. Semuenzaniso, unogona kuudza munhu wauri kuda kushamwaridzana naye kuti akudane nezita rako. Unonzwa sei kana akaramba kushandisa zita rako? Unogona kutanga kufunga kuti haasi kuda kuita shamwari yako. Ndizvo zvazvakaitawo naMwari. Jehovha akatiudza zita rake uye anoda kuti tirishandise. Patinorishandisa tinenge tichiratidza kuti tinoda kuva pedyo naye. Anoona ‘vaya vanofunga kana kuti vanokoshesa zita rake.’—Maraki 3:16.
Kuziva zita raMwari ndiro danho rekutanga rinokosha kana tichida kuva pedyo naye. Asi hatifaniri kungogumira pakuziva zita rake. Tinofanira kuziva zvakawanda nezvake, zvakadai seunhu hwake.
Zita raMwari ndiJehovha. Zita iri rinoratidza kuti anokwanisa kuzadzisa zvaanoda
Vakawanda vanobvunza mubvunzo iwoyo. Zvimwe wakambozvibvunzawo. Mubvunzo uyu tinogona kuubvunza seizvi: Kana zvimwe zvinhu zvese zviri muchadenga uye zviri panyika zvakasikwa naMwari, ko iye Mwari wacho akasikwa naani?
Nyanzvi dzesainzi dzinobvumirana kuti zvinhu zviri muchadenga uye zviri panyika zvine pazvakatangira. Zvavanotaura zvinoenderana nevhesi yekutanga iri muBhaibheri inoti: “Pakutanga Mwari akasika matenga nenyika.”—Genesisi 1:1.
Zvinhu zviri muchadenga uye zviri panyika hazvina kungoerekana zvavapo. Saka kuti zvinhu zviri muchadenga uye zviri panyika zvivepo panofanira kunge paine munhu akanga agara ariko akazviita. Munhu iyeye ndiJehovha Mwari uyo ane simba rese.—Johani 4:24.
Bhaibheri richitaura nezvaMwari rinoti: “Makomo asati aberekwa, Kana kuti musati mabereka pasi nenyika inobereka zvibereko sokunge nemarwadzo okusununguka, muri Mwari kubvira narini kusvikira narini.” (Pisarema 90:2) Saka, zvinoreva kuti Mwari agara angoriko. Ndiye akasika zviri muchadenga nepanyika.—Zvakazarurwa 4:11.
Kuva Nekutenda Muna Mwari Kutenda Muna Mwari Mwari Mibvunzo yeBhaibheri Inopindurwa
Ndehupi unhu hukuru huna Mwari?
Text Nzira dzokudhaunirodha nadzo mabhuku NHARIREYOMURINDI Nhamba 1 2019 | Mwari Unomuziva Here?
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa NHARIREYOMURINDI Nhamba 1 2019 | Mwari Unomuziva Here?
Nhamba 1 2019 | Mwari Unomuziva Here?
NHARIREYOMURINDI Nhamba 1 2019 | Mwari Unomuziva Here?